Sevhisi - Shenzhen Lantaisi Technology Co., Ltd.
Isu tinokwanisa kupa OEM masevhisi kune vatengi vedu. Kusvika parizvino, takaita kugadzirwa kwakawanda kwemarudzi anopfuura makumi maviri ezvigadzirwa, zvakagadzirirwa pachivande kumusika. Kana iwe uchida mamodheru edu uye uchigona kuraira iwo mashoma odha huwandu, tinogona kuita OEM kubatana. Isu tinodhinda yako yakatarwa LOGO pane chigadzirwa, pasuru uye bhuku rekuraira, nezvimwe.
Tine yakazvimirira R & D uye dhizaini kugona, uye tinogona kugadzira akasiyana mamodheru ezvigadzirwa. Kana iwe uine rako zano rezvigadzirwa zvechigadzirwa, tinogona kugadzirisa chitarisiko kana chimiro chechigadzirwa. Isu tinokwanisa kugadzira zvigadzirwa zvakasarudzika zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi kuve nechokwadi chemusiyano wechigadzirwa uye akasiyana ekutengesa mapoinzi. Parizvino, akati wandei makuru uye anozivikanwa mhando vakaita ODM kubatana nesu, uye yedu R & D uye dhizaini kugona zvakave zvakabvumiranwa nevatengi.
Gamuchirai vatengi vazhinji kuti vashande pamwe nesu muODM sevhisi.
Kwazvakarerekera Package Order
Isu tinogamuchirawo maodha ezvidiki zvidiki zvekusarerekera kurongedza. Ukangotanga kutengesa zvigadzirwa zvemagetsi zvisina waya kana kungotanga kushandira pamwe nesu kekutanga. Iwe ungangoda odhiyo yekuyedza yezana zana kana maviri kana mazana matatu emayuniti. Mukupindura kudiwa uku, tinokurudzira kuti iwe uite odha diki nekusarerekera kurongedza, pasina kudhinda iyo LOGO pane zvigadzirwa nemapakeji, uye hapana chakaparadzaniswa dhizaini.
Saka kana iwe uri mune ino mamiriro, iwe unogamuchirwa kushandira pamwe nesu kwekusarerekera kurongedza maodha. Isu tinopa zvigadzirwa zvinonyanya kukodzera kwauri.
Kana iwe uine yako yega fekitori fekitori kana mushandirapamwe shell fekitori, asi iwe unoda isu kuti titipe yemukati PCBA. Tinogona kupa yakaparadzana PCBA kwauri. Iwe unogona kuungana uye pakupedzisira woedza zvigadzirwa mufekitori rako reShell. PCBA yakagadzirirwa nevanjiniya vedu, uye nekodzero dzakazvimiririra dzepfuma kodzero uye kuita kwakakura Mazana ezviuru ePCBA atumirwa kune vatengi pari zvino.
Welcome to PCBA pamwe nesu, isu achapa kupfuura yakavimbika uye yakatsiga PCBA kwauri, maita basa.